QORAALKA AXDIGA IYO DASTUURKA SOOMAALIYA OO LA ANSIXIYEY.
15-sebtembar,03 ayey aheyd maalintii la ansixiyey qoraalka buugga axdiga iyo dastuurka soomaaliya, maalintaasi ayaa shirka waxaa ka maqnaa hogaamiyayaasha ka kala tirsan dawlada KMG iyo Golaha samata bixinta.
Maanta 2dii-duhurnimo ayaa ergada ka qayb galeysa shirka nabada soomaalida isugu timid qolka weyn ee shirweynha soomaalida ee Mbagathi.
Guddoomiyaha guddiga fududeynta Farsamada IGAD ee shirka soomaalida muddane Bathuel A.kipligat ayaa ugu horeyntii codsadey in shirka lagu furo aayada quraan ah, waxaana ka akhriyey sheekh cabdirashiid ,ka dib waxaa hadalkii qaatey guddoomiyaha oo aqriyey qodobadii iyo heshiiskii 29-janaayo ee guriga madaxtooyada kenya ee kulankii wada tashiga ee safari park ee u dhaxeeyey 9-janaayo ilaa 29-janaayo, kadib waxa uu akhriyey qoraalkii 17kii-bishan ee wasiirka arrimaha dibada oo qodobadaasi faahfaahinayey, intaa ka ka dib waxaa halkaasi haddolo kala duwan ka soo jeediyey hogaamiyayaasha soomalida ee shirka,
Doodo iyo fikrado ka dib waxaa hadalkii qaatey safiirka dawlada kenya ee soomaaliya mudane maxamed cabdi afey waxa uu sheegay qodobadii iyo qoraaladii iyo tirada ergada ay dawlada kenya iyo IGAD ku casuuntay.
Gudoomiyaha ayaa ergada ka codsadey in ay aqoonsiga ergonimada kor u taagaan,ergadii ayaa kor u taagtey waan la ansixiyey inkastoo col.cabdulaahi yuusuf iyo salad maxamed jeele ayan u istaagin u codey iyo heestii soomaaliya toosoo.
hon.moses watamenga, wasiir ku xigeenka arrimaha dibada kenya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in maanta wajiga labad la xiray lana ansixiyey qoraalka buuga axdiga iyo dastuurka soomalida.
Waxaa goobjoog ka ahaa dhamaan wakiilada beesha caalamaka ,dawaladaha carabta ,midawga afrika ,midawga yurub, iyo dawlada mareykan .
Dawlada Itoobiya ayaan ka soo qayb galin maanta halka IGAD inteeda kale u wada dhamaayeen.